Baaris la xiriirta cudurka macaanka ee dhallaanka oo Yurub ka socota - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Petra Haupt/Sveriges Radio
Baaris la xiriirta cudurka macaanka ee dhallaanka oo Yurub ka socota
La daabacay onsdag 17 april 2019 kl 09.59
Gobolka Skåne ayay ka socotaa tijaabin ay caruurta khatarta ugu jirta cudurka macaanka ay cuntada iyo cabitaanka ku qaadanayaan insulin.
Rajada laga leeyahay cilmi baaristan ayaa la xiriirta ka hortagga cudurka macaanka diabetes typ 1 oo badanaa ku dhaca caruurta.
Helena Elding Larsson, dhakhtar caruur oo ka howl-gasha cisbitaalka jaamacadda Skåne.
– Caruurta barkood ayaa afka ka qaadanaya insulin iyadoo barka kalana la siinayo kaniini aan insulin wadan, ayey tiri Helena Elding Larsson oo hogaamineysa daraasaadka mar ay wareeysi siisay wariyaha Ekot ee Petra Haupt.
Caruur gaareysa 900 oo ay da’doodu ka yar tahay 18 sano ayuu sanad kasta ku dhacaa cudurka macaanka. Wuxuu yimaadaa cudurku kadib markuu difaaca jirku weeraro unugyada jirka ee soo saara maaddada insulinka.
Caruurta ka qeyb qaadaneysa daraasaadka ayaa ah kuwo horey dhiig looga qaaday iyagoo ku dhashay cisbitaalada Skåne xagaagii hore.
Caruur gaareysa 2000 ee ilaa iyo iminka la baaray ayey 30-meeyo ka mid ahi khatar ugu jiraan inuu cudurku ku dhaco. Reeraha caruurta ayaa ogolaaday ka qeyb qaadashada daraasadda si ilmahooda ay afka uga qaataan insulin.
Linda Beckman, waa hooyada Dikte Dovermyr oo jira sideed bilood kana qeyb qaadanaya daraasadda.
– Markaan ogaaday in gabadheyda uu ku dhici karo cudurka macaanka ayaan u arkay inaan ka qeyb qaadano daraasadda haddii kale waxaan ku jiri lahaa welwel aan dhamaan, ayey tiri hooyadu.
Caruurtan ayaa insulinka qaadan doonta maalin kasta ilaa ay ka gaarayaan sadax sano iyadoo daraasaad tan la mida ka socdaan lix ka mid ah waddammada Yurub oo ey ka mid yihiin Jarmalka, Boolan, Ingiriiska iyo Beljam.